Resaka teny malagasy hatrany.
Mandehandeha ratsy ny zavatra ataoko ka dia mangala-potoana hiblaogy aho na dia efa nilaza ho "sahirana aza". Izany moa dia noho i finoanaranoray ihany hihihi : naveriny napetraka mantsy ilay lahatsorany mitondra ny lohateny hoe " afaka 50 taona ... foana ny teny gasy, hoy di ...". Nokitihiny ilay kilemako (resa-pitiavana teny malagasy) ka dia tsy naharay lamba tsy fidiny RaToky . Novaliako sy nanaovako fanamarihana io lahatsorany io. Lasa lavalava anefa ny resako tao, ka mba tiako hotahirizina ato amin'ny blaogiko koa. Izay no ela, fa dia ndao hatao ady vomangan'Ikirijavola e, ka ny voamasony no 'ndeha hopotserina avy hatrany :
Raha fintinina ny zava-dresahan'i finoanaranoray ao dia ny hoe : aza mihevi-tena ho mpindrana na mpangalatra isika rehefa miteny ireo teny vahiny nogasiana izay efa ofisialy sy ny hoe mitenena teny gasy raha mbola azo atao.
Mitovy hevitra tanteraka aminy aho, ary ho fanohanako ny heviny dia notsahiviko ireto manaraka ireto :
Ny teny dia mivoatra. "Ary ny teny tsy mivoatra dia ho faty" : tenina mpandinika iray io. Raha mandinika ny teny vahiny matanjaka isika dia hita fa tsy mitovy ny fahiny sy ankehitriny. Ary nisy fivoarana im-betsaka vao tody tamin'izao ry 'zareo. Ary na dia amin'ireo teny vahiny matanjaka ireo aza, dia tsy ny voasoratra loatra intsony no resahina amin'ny andavanandro (izany dia ahafahana milaza fa eo an-dalam-pivoarana hatrany ny teny iray).
Ohatra : Amin'ny teny anglisy, ny teny hoe "you" (adika hoe ianao na ianareo) dia vao haingana mihitsy ; ary efa teny ho amam-polony no nampiasaina talohan'izany : jereo ato. Ohatra fotsiny io fa midira ato raha te hahita ny lisitra fenon'ireo teny anglisy fahiny : http://wandership.ca/projects/eow/.
Ireo fiovoarana ireo moa dia vao tsy ela satria tamin'ny taonjato faha-VIII tany ho any. (jereo A T O ny tantaran'ny teny anglisy). "Vao tsy ela" raha oharina amin'ny maridrefin'ny tantaran'ny zanak'olombelona.
Ohatra hafa amin'ny teny frantsay : "je ne suis pas malade" no fanoratra. Rehefa miteny anefa dia tsy misy frantsay hiteny an'io fa "suis pas malade" hoy izy. Ao koa ny "il y a ..." izay lasa "y a ..." fotsiny.
Toy izany koa ny teny hafa marobe : ny italiana, ny frantsay, ny alemà, sns. Ny nampiavaka ireo teny ireo fotsiny dia noho ny fananan'ny tompony finiavana handrindra (initiative de rationnalisation) azy. Izany fandrindràna izany dia niainga amin'ny dingana maro :
1°- fanoratana an-tsoratra ireo teny fampiasa amin'ny andavanandro. Tsy tokony hiala lavitra amin'ny fampiasa andavanandro ny teny soratan'ny akademia, raha tsy izany manko dia tsy hisy hampiasa akory.
2°- fampidirana ireo teny vahiny (ny teny rômana tamin'izany fotoana no niandohana, izay fototry ny teny erôpeana rehetra). Io findraman-teny io no mahatonga ny teny rômana, grika ary arabo ho betsaka amin'ny teny erôpeana sy ny tenin'izao tontolo izao. Rehefa novainy hifanaraka amin'ny fiteniny avy anefa izany dia lasa teniny. ohatra :ny hoe psychology (teny anglisy), sy psychologie (teny frantsay), dia samy nalaina avy tamin'ny teny latina "psychologia" (taonjato xvi), izany moa dia nalain'ny latina tamin'ny grika "ψυχή « fanahy » sy λόγος « fahaiza-miteny ». Fototra : jereo http://www.cnrtl.fr/etymologie/psychologie.
(ato misy lisitra feno ho an'izay liana amin'ny etimolojian'ny teny frantsay : http://www.cnrtl.fr/etymologie/)
3°- fikarohana ny lalàna izay mifehy izany teny vaovao izany : ny fitsipi-pitenenana, sns.
Ireo rehetra ireo dia tokony hitarika antsika :
- hiteny ny tenin-drazantsika hatrany.
- tsy hihevi-tena ho mpangalatra na mpindrana rehefa mampiditra teny vahiny ho gasiana.
- handinika ny lalànan'ny tenintsika : ireo mpandinika ny teny sy ny akademia moa no tena tompon'andraikitra mivantana amin'ity farany ity. Nefa tokony ho ampiasaintsika koa izany voka-pikarohan-dry zareo izany ho fandrisihina azy hatrany.
Tsy ny tenintsika no tsy ampy, fa maro amintsika no tsy dia mbola miezaka hampivoatra azy.
"Andrianiko ny teniko , ny an'ny hafa koa feheziko".
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (85) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)